Ungayikhetha kanjani iphedi yenhlanzeko efanele?
Wonke umuntu wesifazane uhlukile kuye, kanjalo nendlela umzimba wakhe ophendula ngayo ezikhathini. Lesi ngesinye sezizathu zokuthi kungani izinhlobo eziningi zamapayipi enhlanzeko zitholakala emakethe. Okuthandayo kuhlukile ngoba kuya ngezinto ezifana nohlobo lwesikhumba, ukuma komzimba, nokuhamba. Ukubheka okubaluleke kakhulu ...
Ungayikhetha Kanjani Iphedi Yokuya Esikhathini
Ubuwazi: Ama-60% wabesifazane agqoka iphedi losayizi ongafanele? I-100% ingakushintsha lokho. Ku-Njalo, ukuvikelwa nokududuzeka kwakho kuyinto eza kuqala kithi. Siyazi ukuthi ukuba nephedi yokuya esikhathini elingana kahle kukunikeza ukuvikeleka kwesikhathi okudingayo. Usayizi 'owodwa ulingana konke' ukucabanga akusebenzi impela lapho i-choo ...
Ungayikhetha Kanjani Iphepha Lamathishu?
Wonke umuntu uyazi ukuthi iphepha lezicubu liyiphepha le-sanitary elahlwayo elicutshungulwa ngokusika, ukusonga, njll., Ngemuva kokuthi lenziwe ngephepha eliluhlaza lesitshalo. Amafomu womkhiqizo afaka ikakhulukazi izicubu, ama-napkin, ama-wipe, amathawula wephepha, nephepha lezicubu. , Isetshenziswa kabanzi ezindaweni zokudlela, ematafuleni okudlela, emakhaya nakwamanye ama-pl ...
Amathiphu ama-3 wokukhetha iphepha lezindlu zangasese
Kuzo zonke izinto esizithenga masonto onke, iphepha langasese lingenye yezinto ezibaluleke kakhulu futhi ezibaluleke kakhulu. Ngenkathi umsebenzi wephepha langasese ubonakala uqonde phambili futhi usebenza kahle, iqiniso lihlala likhona ukuthi iphepha esilikhethayo linomthelela omkhulu ezimpilweni zethu futhi linethuba lokuguqula ...
indwangu yokugeza indle
Indwangu yokuhlanzeka, ithawula lokuhlanzeka, iphedi yenhlanzeko, iphedi yokuya esikhathini, noma iphedi yinto efuthwayo egqokwa ngabesifazane ezingutsheni zabo zangaphansi lapho besesikhathini, begazi ngemuva kokubeletha, belulama ekuhlinzweni kwabesifazane, bekhishwa isisu noma bekhipha isisu, noma kunoma yisiphi esinye isimo lapho kudingekile...